Ugbu a ọ dị mfe ịtụ na ntanetị na Google Maps, mana ọ bụghị kpamkpam | Gam akporosis
Ejirila ihe ngosi dị mkpa mepụta Google Maps na nke na-abịa ezigbo maka ụbọchị ndị a nke iche. Karịsịa iji nwee ike ịchọ ebe ndị ahụ na-eweta n'ụlọ ma kwe ka onye ọ bụla nọrọ n'ụlọ iji nata zụta nri ma ọ bụ Pizza ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
Ihe ị ga-ekwu banyere ya COVID-19 na otu ọ ga-esi gbanwee ọtụtụ akụkụ kwa ụbọchị nke ụbọchị anyị. Otu n'ime ha na-apụ apụ na mkpa maka nnukwu ụlọ ahịa n'ịntanetị iji nwee ike ịtụ ahịa n'ụlọ. Kedu ihe na - egbochi anyị ịpụ ma na - aga ebe anyị ga - ahụ ọtụtụ mmadụ. Mgbasa mmekọrịta mmadụ na-amanye azụmaahịa imeghari.
1 Mgbasa mmekọrịta ọha na eze maka ọrụ dijitalụ
2 Maapụ imeghari ka oge ọhụrụ
3 Ihe anyị na-atụ uche: imeziwanye ahụmịhe n'etiti ụlọ ahịa niile na ndị ahịa
Mgbasa mmekọrịta ọha na eze maka ọrụ dijitalụ
Ihe Google Maps bụ otu n'ime ngwa kachasị mma anyị nwere na anyị mobiles ọ dịghị ihe ọhụrụ na-ekwu. Ma ọ bụ ugbu a mgbe ọrụ gị maka ịchọta ebe azụmahịa ga-aba uru nke ukwuu ịchọta ebe ndị ahụ anyị nwere ike ịtụ nri n'ụlọ ma ọ bụ ọbụna zụta ihe n'ịntanetị ka nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ nnukwu mpaghara weta ya n'ọnụ ụzọ ụlọ anyị.
Ma ọ bụ na ugbu a Google Maps na-akwalite saịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmahịa na nye iwu ka adreesị ma ọ bụ na-anakọta n'otu ntọala. Ọ bụrụ na ịmalite ngwa ahụ ị ga-ahụ aha abụọ ahụ n'elu ka ọ bụrụ na ịpị otu n'ime ha ị nwere ike ịchọta ụlọ ahịa niile dị n'ógbè gị ebe ị nwere ike ịtụ n'ụlọ, ma ọ bụ ọbụna bulie nri na ntọala gị.
Pịkwa aha abụọ ahụ na-akpọrọ anyị gaa na usoro nzacha ịchọta ụdị nri dị iche iche, nke kachasị baa uru ma ọ bụ ndị na-emeghe n'oge ụfọdụ.
Maapụ imeghari ka oge ọhụrụ
Na mbu, mkpado abụọ a anọghị site na mgbe anyị bidoro ngwa ahụ. Nke ahụ bụ, anyị nwere ike ịnweta ozi ahụ naanị site na bọtịnụ "ọzọ" nke dị na ala aka ekpe. Abụọ nhọrọ ugbu a dị mkpa na ụbọchị ndị a nke iche na Google ewepụla na ohere ọzọ echedoro ka ha wee hụ ha nke ọma na elu mgbe anyị malitere ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị akara akara ọ bụla a na-emepụta ndepụta ụlọ ọrụ na-enye ọrụ a na akara ngosi ya iji chọta ya na eserese ngosi. Ihe anyị ka kwesịrị ịma
Ọrụ ọhụrụ a dị n'ọtụtụ mba, mana ọ bụghị ihe niile, yabụ ọ bụrụ na ịchọtaghị ya na mbụ, ọ ga-abụ okwu nke awa ma ọ bụ ụbọchị tupu ịnụ ụtọ ya na isi ihuenyo.
Ihe anyị na-atụ uche: imeziwanye ahụmịhe n'etiti ụlọ ahịa niile na ndị ahịa
Eeh, anyị na-atụ uche ụkọ nke ọtụtụ nzacha na nhọrọ iji nyochaa ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji chọta ngwa ngwa nnukwu ụlọ ahịa, ndị na-egbu anụ na ebe ndị ahụ na-enye nri. N'ụbọchị ndị a mgbe ndị nwe onwe ha niile agaghị enwe ike ịmepe ụlọ ahịa dị n'ịntanetị, na Google Maps nyekwuru nhọrọ iji nyocha "n'ụlọ" ma si otú a chọta ọkụkọ ma ọ bụ naanị nnyefe ga-abụ ihe dị egwu n'onwe ya.
Karịsịa ka ndị ahịa ha ogologo oge mara na ha na-aga n'ihu na-enye ọrụ ha ma n'otu oge ahụ ugbu a ha na-enye nhọrọ nke ọrụ ụlọ. Ya bụ, jikọọ ndị na-egbu anụ, ụlọ ahịa ọkụkọ, ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọtụtụ ụlọ ahịa na ndị ahịa ndị na-achọ ọrụ ịzụ ahịa n'ịntanetị na ụlọ ọrụ azụmahịa ndị ahụ dị na Google Maps, mana enweghị ike iji akara ahụ.
Ọ dị ezigbo mma inwe ike ịtụ nri na ntanetị, mana n'ihi oke ibu na nnukwu ụlọ ahịa na-enwe na ntanetị n'ịntanetị, ịgbalite nzacha ndị a sitere na Maapụ Google ga-ebelata ma ndị ahịa ma obere ụlọ ahịa na ụlọ ahịa.
Nhọrọ dị ụtọ nke Google Maps iji chọpụta ụlọ nri ndị na-enye iwu n'ụlọ na ihe oriri iji kpokọta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Maps na-eme ka ọ dị mfe ịtụ nri na ntanetị ugbu a anyị niile bụ ụlọ, mana anyị na-efu ihe dị ezigbo mkpa
Etu ị ga-esi nweta mkpụrụ ego efu na mkpụrụ ego maka Mkpụrụ ego Master kwa ụbọchị